उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नदिई याेजना संचालनमा
प्रकाशित मिति: फाल्गुन 26, 2075
सिरहा,फाल्गुन २६ गते । नदी नियन्त्रण कार्यक्रम बारे उभाेगत्ता समितिलाई कुनै जानकरी नगराई जलस्राेत तथा सिँचाई विकास डिविजन कार्यलय सिरहाबाट कार्यक्रम संचालन गरेका हुन ।
मिर्चाैया र कल्याणपुर नगरपालिका बिचकाे रूदलपुरकाे घुर्मी खाेलामा संचालित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम उपभाेक्ता समिति मार्फत संचालन रहेपनि समितिका सदस्याहरूलाई कुनै जानकारी नरहेकाे बताए ।
नेपाल सरकारकाे कानून अनुसार कुनै पनि याेजना संचालन गर्दा नगरिक वडा पत्रमा याेजना बारे सम्पूर्ण जानकारी याेजना संचालन स्थलमा राख्नु पर्ने व्यावस्था रहेकाे छ । तर रूदलपुर क्षेत्रकाे घुरमी खाेलामा संचालित काराेडैाँकाे नदी नियन्त्रण याेजना बारे उभाेगत्ता समितिका सदस्याहरूलाई पनि जानकारी िदईएका छैन् ।
कार्यक्रम कति काे छ ? के ईस्टिमेट गरेकाे छ ? कुनै जानकारी नरहेकाे उभाेगत्ता समिति सदस्य र कार्यराक्रम स्थल हेरि रहेकाे राम सिष साहले बताउनु भयाे । ५० सेन्टिमिटर सम्म ढुङ्गा तार बेरीने भनेकाे अाधारमा कार्य गरि रहेका र याे बाँध ठुलाे बढीलाई थेग्न नसकने काम गर्ने एक मजदुरले बताउनु भयाे । नदी नियन्त्रण बारेमा उपभाेक्ता समिति अध्यक्ष जिवछ मंडल सँग बुझदा हामीलाई कुनै जानकारी नरहेकाे बताए । जलस्राेत तथा सिँचाई विकास डिविजन कार्यलय सिरहालाई थाहा हाेला भने बताए । याेजनाकाे कुल बजेट बारे साेधदाँ एउटा याेजना ३३ लाख रहेकाे बताउनु भयाे ।
यस्तै बजेटकाे अार्काे याेजना पनि त्यही ठाउँमा संचालन रहेकाे छ ।
एक सय पाँच मिटर बाँध निर्माण गरिने उपभाेक्ताहरूलाई मात्र जानकारी दिईएकाे एक सदस्यले बताउनु भयाे । कुल बजेट बारे पनि जानकारी नदिई संचालनमा रहेका यस्ता याेजनामा ईस्टिमेट विपरित कार्य र बजेट भ्रष्टाचारकाे नियत अनुसार संचालन भईरहेकाे स्थानीयहरूकाे भनाइ रहेकाे छ । जलस्राेत तथा सिँचाई विकास डिविजनले गठन गराईएकाे उपभाेक्ता समिति पनि फर्जि र किर्ते गरि संचालन भएकाे स्थानीयहरूकाे अाराेप रहेकाे छ । यसलाई छानिभिन गरि जनता समक्ष परदर्शि बनाउन नेपाल सरकारकाे निकायलाई ध्यान जानु जरूरी रहनुका साथै सिरहा जिल्लामा अख्यतियार दुरउपयाेग अनुसन्धान अायाेगकाे मतहतमा गठन गरिएकाे भ्राष्टाचार निगरानी समूहले निगरानी गर्नु पर्ने स्थानीयहरूकाे माग रहेकाे छ ।